Business | YPay
Y-Pay (Business) အသုံးပြုရန်နည်းလမ်း
1. Y-Pay Online Payment System (Business) ကိုအသုံးပြု၍ (Online ပေါ်တွင် အရောင်းအ၀ယ် နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ငွေလက်ခံမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း) e-commerce လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Merchant များအနေဖြင့် ဦးစွာ ပထမ Y-Pay ရုံးချုပ်သို့လာရောက်၍ ပိုင်ရှင်အမည်၊မှတ်ပုံတင်၊ Company မှတ်ပုံတင် (သို့) စည်ပင်မှတ်ပုံတင် ဖြင့်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ မှတ်ပုံတင်ရမည်။
2. Y-Pay တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Y-Pay မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်(AGD Bank)တွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း၊ အထောက်အထား များနှင့်အတူ ငွေစာရင်း (Merchant) Bank Account ဖွင့်လှစ်ရပါမည်။
3. သက်ဆိုင်ရာဘဏ် (AGD Bank) တွင် Merchant Bank Account ဖွင့်ပြီးပါက Online Payment (Internet Website)များပေါ်မှ အရောင်းအ၀ယ် နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များမှ ငွေလက်ခံမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် http://www.ypay.com.mm တွင် အသုံးပြု မည့်သူ Merchant ကိုယ်တိုင် Register ပြုလုပ်ရပါမည်။
4. http://www.ypay.com.mm တွင် (Business) Register ပြုလုပ်ပြီးပါက Y-Pay ဖြင့် online ပေါ်မှ ငွေပေးချေမှုများ၊ ငွေလက်ခံမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မိမိဖွင့်လှစ်ထားသော Business Bank Account ဖြင့် Y-Pay Website ပေါ်တွင်(Add Bank Account) & (Verify Bank Account) ပြုလုပ်ရပါမည်။
5. မိမိဖွင့်လှစ်ထားသော (Business) Bank Account ဖြင့် (Add Bank Account) & (Verify Bank Account) ပြုလုပ်ပြီးပါက Online ပေါ်တွင် အရောင်းအ၀ယ် နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ငွေလက်ခံမှုများစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် Y-Pay Website မှ ပြုလုပ်ပေးထားသော Merchant API ကို မိမိအသုံးပြုလိုသည့် Online Shopping Website တွင် Integration ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Merchant API Integration နှင့်ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်ကို http://www.ypay.com.mm တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
6. Y-Pay Online Payment System ကို အသုံးမပြုမှီ Merchant များနေဖြင့် Y-Pay မှ ချမှတ်ထားသော Merchant နှင့် ပတ်သက်သည့် Policy များကို လိုက်နာနိုင်မှသာလျှင် Y-Pay System တွင် Merchant Account ရမည်ဖြစ် ပါသည်။
7. Y-Pay Online Payment System ကိုအသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းပေါ်မှ အရောင်းအ၀ယ် နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ငွေလက်ခံမှုများကို (၂၄)နာရီလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
8. Y-Pay Online Payment System ကို အသုံးမပြုမှီ Merchant များနေဖြင့် Y-Pay မှ ချမှတ်ထားသော Merchant နှင့် ပတ်သက်သည့် Policy များကို လိုက်နာနိုင်မှသာလျှင် Y-Pay System တွင် Merchant Account ကိုအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။